Consider it done. Really hope this will work.
bro the letter is too casual and some facts are irrelevant. i think it will be better u edit and send again. I m worried the senator will not take it seriously after readingamail which look like spam.
ကျနော်လည်းသိတယ်ခင်ဗျ..။ ကိုယ်က ဗမာ ဆိုတော့ တောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံး ရေးရတာ။ သြစီအစိုးရ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ဒါပြီးရင် Perth မှာ ငွေလွှဲ လုပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်တွေ ပါပါလိမ့်မယ်။ အဓိက ကျနော်တို့ ဗမာတွေ ပြောဖို့ပါ။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားလဲသိပါတယ်ဗျာ။